सन्दर्भ मधेस आन्दोलन: मधेसी जनताले के पाए..??-NepalKanoon.com
सन्दर्भ मधेस आन्दोलन: मधेसी जनताले के पाए..??
भदौ ५, काठमाण्डौ । मधेस आन्दोलनबाट धेरै नेता जन्मिए, उनीहरू मन्त्री पनि भए तर मधेसी जनताले के पाएरु २०६३ सालको मधेस आन्दोलनका पहिलो सहिद रमेश महतोका बुबाको प्रश्न हो यो ।
लहान बजारदेखि १८ किलोमिटर दक्षिण-पश्चिम सिरहाको फूलबरिया मझौरामा शुक्रबार पुग्दा घरमा सहिद का बुवा रवि, आमा रानो र दाजु बालकृष्ण थिए । रविले निराश हुँदै भने, सहिदको बलिदान खेर गयो । मेरो छोराको बलिदान केही मान्छेलाई मन्त्री, नेता र माननीय बनाउन मात्र थिएन ।
नौ वर्षअघिको मधेस आन्दोलन र छोरा रमेशका विषयमा कुरा सुरु गर्दा आमा रानो भक्कानिइन् । संविधानको विषयमा केही बताउन नजान्ने उनले भनिन्, ‘धेरै छोराका आमा यसरी नै रोइरहेका छन् । आँसु पुछ्ने नेता कोही भएनन् ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूले अबको आन्दोलनमा सहिद हुनेका परिवारलाई ५० लाख नगद, नोकरी र शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरेको पनि रमेशका बाबुआमाले सुनेका छन् । फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले घरमै आएर दिएको वचन त पूरा गरेनन् । अब के होलारुु रविले भने, ‘मधेसी जनताको अधिकार प्राप्तिका एउटा छोरा सहिद भयो, हामीजस्ता धेरै छोराले तपाईंलाई सहारा दिन्छौं भनेका थिए । खोइ, त्यसपछि कोही आएनन् । अन्नपूर्ण पोस्ट